कालोपत्रे गरेको ४ महिना नपुग्दै सडक भत्कियो, आफ्नो नाकैमा यस्तो हुँदा समेत पालिका मौन [फोटोसहित]
जनता भ्वाइस calendar_today ३ साउन २०७७, 4:57 pm
साउन ३ । जनता भ्वाइस संवाददाता, रामेछाप ।
दोलखा जिल्ला तामाकोशी गाउँपालिकाको जफे–मालु–हावा सडक कालोपत्रेमा चरम घोटला भएको देखिएको छ । दोलखा जिल्लाको तामाकोसी गाउँपालिकामा रहेको जफेको ढोलिखोला जंगलबाट हावा, च्यामासम्म पुग्ने मोटरबाटोमा गरिएको सडक कालोपत्रे यतिसम्म गुणस्तरहीन छ कि, जो कोही पनि त्यो कुराको सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । यो सडक कालोपत्रे गरिएको १ वर्ष पनि बितेको छैन । पहिलोवर्षे ‘एनिभर्सरी’ मनाउन पाउँदा नपाउँदै यो सडकको हविगत चौपट भएको हो ।
जताततै सडक भत्किएको छ । न नाला कटिङको व्यवस्थापन गतिलो भएको छ, न त सडकमा विच्छ्याइएको कालोपत्रे नै गुणस्तरयुक्त छ । आर.आर.आर. अर्थात् ट्रिपल आर नामक संस्थाले यो सडकको ग्रावेल विच्छ्याउने काम भएपछि खण्डखण्ड अनुसार स्थानीय पेटी ठेकेदारहरुले काम गरेको उक्त सडकमा कुनै पनि स्थानमा गतिलो कालोपत्रे देख्न सकिँदैन । यो बारेमा स्थानीयबासीहरु निकै आक्रोसित भएका छन् । कतिपय स्थानीयबासीहरु यो सडक पिच गर्ने क्रममा स्थानीय गुण्डाहरुका कारण कम गुणस्तरयुक्त पिच गरिएको दावी गर्छन् ।
सडकमा भएको कालोपत्रे प्रति जफेका स्थानीयबासी केशब पोखरेल सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुन्दन काफ्लेका गुण्डाहरुको दादगिरीका कारण सडकको कालोपत्रे कमसल भएको हो । यो सडकमा यतिसम्म लापर्वाही भयो कि, माटो भएको ठाउँमा सिधै लोडरले पेलेर अलकत्रा छर्किएर चिप्स खन्याउँदै फेरि लोडरले पेल्ने काम भएको छ ।’ यस सडकको प्राय धेरै स्थानमा खेत परेको छ । आफैंमा जफेबेसी धेरै उब्जाउ हुने जग्गा पनि हो । सो उब्जाउका लागि कुलो बनाउनु पर्ने स्थानमा न कुलो काटिएको छ, न पानीका लागि कुनै पाइपको नै व्यवस्था गरिएको छ । खेतधनीहरु आफैले जताबाट सहज हुन्छ, त्यतैबाट आफ्नो मनोमानी सडक भत्काएरै कुलो निर्माण गरेका छन् ।
यो सडक तामाकोसी गाउँपालिकाको नाकै चिरेर निर्माण भएको छ । आफ्नो नाकै अघि सडकको हालत यस्तो हुँदा पनि गाउँपालिकाको उचित ध्यान जान नसकेको पोखरेल गुनासो गर्छन् । हिजो निर्वाचन भन्दा अघि यो सडक नै आफ्नो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएको बताउने गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेल आज हिजोको बोली फेर्दै यतिसम्म भएपनि काम त भएको छ नि ? भन्ने ओठे जवाफ दिने गरेको केशव बताउँछन् । उनी यतिसम्म पनि शंका भएको बताउँछन् कि गाउँपालिका अध्यक्षलाई ठेकेदार पक्षले निकै मोटो रकम दिएको हुन सक्छ ।
अर्का स्थानीयबासी रामबहादुर पोखरेल पनि यो सडकको कालोपत्रे प्रति सन्तुष्ट रहेनछन् । सडकमा जताततै भत्किएको नाला र मेशिनरी वालप्रति उनको कडा कटाक्ष रहेको छ । हामीसँगको कुराकानीमा रामबहादुर यसो भन्छन्, ‘यो पनि कुनै पिच हो ? यो त सडकको छारो र धुलो पुरेको मात्रै हो । ठेकेदारलाई बढी नाफा कमाउनु परेका कारण यस्तो गुणस्तरहीन काम गरिएको हो । खोलामा गाडी कुदाइएको हो कि सडकमा कुदाइएको हो, छुट्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्था यो सडकमा छ । बरु थोरै गरेको भए पनि हुन्थ्यो । सडक पिच सक्ने बहानामा लठिभद्र काम छोडेको छ ।’
ढोलीखोला जिरो किलोबाट मालु डाँडागाउँ करिब १० किलोमिटर बाटोमा नै २० भन्दा बढी स्थानमा कालोपत्रे गरिएको छैन । यसै पनि जफे, मालुमा खोला खोल्सीहरु बढी भएको ठाउँ हो । कुनै पनि खोला खोल्सीहरुमा कजवे निर्माण गरिएको छैन । यतिसम्म कि तामाकोसी गाउँपालिका भएको स्थानमा नै सडक कालोपत्रे हुन सकेको छैन । यस्तो देख्दा देख्दै पनि गाउँपालिका मौन बसेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्य हो ।
सडकमा बिच्छ्याएको चिप्स पनि पानीले बगाएर सडक नाङ्गो भएको छ । स्थानीयबासी शम्भु विश्वकर्माका अनुसार बाटोमा विच्छ्याइएको चिप्सलाई स्थानीयहरुले उठाएर घर लगेको बताउँछन् ।
यो सडकका छेउमा गाडिएका सबै कभरेज पिलरहरु पहिरोको कारणले अलपत्र परेका छन् । यसै विषयको प्रतिक्रिया लिन तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
तर नेपालको राजनीतिमा अन